Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baan uga Faaʼiidaysan Karnaa?
KU AKHRI Abbey Afrikaans Ahanta Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Morocco) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bembe Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bulgarian Sign Language Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fang Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Ghomálá’ Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Huave Huichol Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itawit Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Latvian Sign Language Lega Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mbunda Medumba Mende Meru Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Sign Language New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Ngiemboon Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nsenga (Mozambique) Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Phimbi Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (European) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russian Russian Sign Language Rutoro Rwandan Sign Language Réunion Creole Saint Lucian Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Soomaali South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Taabwa Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yemba Yombe Yoruba Zambian Sign Language Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Miyaad doonaysaa inaad baadhis sameysid sidaad aqoontaada Kitaabka u kordhisid? Ma rabi lahayd inaad wax ka ogaatid qof, meel ama wax laga sheegay Kitaabka Quduuska ah? Malaha waxaad is weyddiisay in Erayga Ilaahay kaa caawin karo dhibaato ku haysato? Haddaba isticmaal maktabadda Hoolka Boqortooyada.
Waxaa yaallo waxyaalo baadhisteenna nagu caawin karo. Waxaa laga yaabaa inaadan luqaddaada ku wada haysan wargeysyada Kitaabka ku saabsan ee Markhaatiyaasha Yehowah. Laakiinse maktabadda Hoolka Boqortooyada waxaa yaallo wargeysyada ugu cusub badnaantooda. Waxaana oolli karo turjumaado kala duwan ee Kitaabka Quduuska ah iyo qaamuus iyo buugag kale oo waxtar leh. Kulanka kahor ama kaddib xor baad u tahay inaad isticmaashid maktabadda. Hadduu kombiyuutar yaallana waxaa dhici karta inuu ku jiro barnaamij af Ingiriisi lagu dhaho Watchtower Library. Kanu waa barnaamij ay ku kooban yihiin wargeysyo badan aannu leenahay. Waxyaalo badan baad barnaamijkan si fudud uga baadhi kartaa sida tacliin, eray ama aayad.
Waxay anfacdaa ardayda Kulanka Nolosha iyo Wacdiga. Markaad khudbad diyaarinaysid waxaad ka faaʼiidaysan kartaa maktabadda Hoolka Boqortooyada. Laybreerigan waxaa masʼuul ka ah hoggaamiyaha Kulanka Nolosha iyo Wacdiga. Wuxuu hubiyaa inay wargeysyada ugu cusub yaallaan oo ay si habeysan u qorsheysan yihiin. Isaga ama qofka Bibleka kula dhigta baa ku caawin karo sidaad u heshid warbixinta ad u baahan tahay. Hase ahaatee Hoolka Boqortooyada laga ma saari karo buugagga maktabadda yaalla. Waana war cad in la daryeelo buugagga oo calaamad laga ilaaliyo.
Kitaabka Quduuska ah waxaa ku qoran “waxaad heli doontaa aqoonta Ilaah” haddii ad u doondoontid sidii “maal qarsoon.” (Maahmaahyadii 2:1-5) Maktabadda Hoolka Boqortooyada baa ku caawin karta sidaad baadhistaada u bilowdid.
Waxyaalahee baa yaallo maktabadda Hoolka Boqortooyada oo baadhitaan loo isticmaali karaa?
Yaa ku tusi karo sida looga faaʼiidaysan karo maktabadda?
Haddii ad rabtid inaad maktabad sameysatid soo ogow waxa yaallo meesha buugagga laga qaato ee Hoolka Boqortooyada. Kan kula dhigta Bibleka baa kuu sheegi karo buugagga ad hor qaadan kartid.
Wadaag Wadaag Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baan uga Faaʼiidaysan Karnaa?
Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baad uga Faaʼiidaysan Kartaa?